Taratasin’ny fiara :: Fandaminana manokana ny fanoloana fahazoan-dalana hamily • AoRaha
Vinavinaina ho amin’ity volana janoary ity ny fanombohan’ ny fanoloana ny fahazoan-dalana hamily teo aloha ho lasa biômetrika. “Hamoaka tetiandro ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsanjaram-pahefana ka aorian’izay no ho afaka hanoloana ny taratasy familiana fiara maimaim-poana”, hoy Razafin­drazaka Dieu Donné, tale jeneralin’ny orinasa Hephalu, solontenan’ny orinasa misahana ny fanamboarana an’ireo karatra ireo eto amintsika, tamin’ny zoma lasa teo.
Hatramin’ny omaly, mbola vitsy ireo olona no tonga mangataka ny hanoloana an’ireo karatra teo aloha ho lasa biômetrika, tetsy amin’ny Ivon-toerana famoahana taratasin’ny fiara, etsy Ambohidahy. “Mbola manana efa-taona ny olona iray hahafahany manolo ny azy”, hoy indray ny loharanom-baovao avy ao amin’io ivon-toerana io. Fantatra fa halahatra isaky ny laharan’ ny karatra mba ho fanamorana ny fandrindrana ny fanovana.
“Hisy fampilazana an-gazety hampahafantarana ny fanombohan’ny fanovana”, hoy indray Razafindrazaka Dieu Donné. Marihina fa karatra fahazoan-dalana hamily mihoatra ny telo alina no efa nivoaka tetsy Ambohidahy, nanomboka tamin’ny volana jona 2019 ka hatramin’ny volana novambra 2019 lasa teo.
Fihanaky ny coronavirus Mitombo isa ireo tanàna ahitana marary vokatry ny fifampikasohana
Saran-jiro sy rano Afaka hahemotra ny fandoavana faktiora volana avrily
Fahombiazan’ny fitsaboana Sitrana ny olona roa tamin’ ireo voan’ny « coronavirus »
Fepetra amin’ny valanaretina Mihamaro ireo mandika ny fihibohana
Fampianarana ambony :: Takian’reo mpandraharahan’ny oniveriste ny fialan’ny minisitra
Toetrandro :: Tombanana hikasika ny morontsiraka rahampitso alina ilay andro ratsy